Lakulan – Xiddigii ugu horreeyay ee gool caawin ka sameeya Stadium Muqdisho | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Lakulan – Xiddigii ugu horreeyay ee gool caawin ka sameeya Stadium Muqdisho
Lakulan – Xiddigii ugu horreeyay ee gool caawin ka sameeya Stadium Muqdisho
Posted by: Mahad Mohamed April 10, 2019
Himilo FM –Cabadalla Ladhiif Maxamed Maxamed waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Waaberi 5-tii March 1958-kii, Cabdalla waxa uu xafiday Qur’aanka Kariimka kaddib waxa uu waxbarashada hoose, dhexe iyo sare kaga baxay iskuulka Allaahda.
Waxa uu ahaa shaqsi aad u jecel kubadda isaga oo ka bilaabay bacaadka xaafadaha, waxa uu kamid ahaa dhallinyarada garoomada bacaadka Iskuul Bulusiiyo, wixii intaasi ka danbeeyay waxaa sii kordhayay hibbadiisa ciyaareed isaga oo qeyb ka ahaa ciyaartoyda iskuulka Allaahda ama Jamaal Cabdinaasir waxaana uu la gaaray guullo aad loogu riyaaqay.
Dhammaadkii 1975-kii, waxa uu ku biiray naadiga Horseed isaga oo kulakiisii ugu horreeyay wajahay naadiga Isnaay Biyaaso oo ka dhisneyd magaalada Jowhar, waxa uu kasoo kacay kursiga keydka isagoo saameyn ku yeeshay kulankaasi laba gool ayuu caawiyay goolna waa uu dhaliyay.
Cabdalla intii uu garoonka ku jiray waxa uu kasoo ciyaaray boosas kala duwan sida burburin iyo diyeeshe, waxaana ku dhiiri geliyay in uu meelahaasi ciyaaro laacibiin ay kamid yihiin Cabdalinii iyo Killer isaga oo ugu danbeyn muujiyey wax aad u sarreeyo. Xiddigihii uu dhibsan jirey in uu ka hor yimaado waxaa kamid ahaa Muxidiin Canbar Khamiis oo kamid ahaa ciyaartoyda naadiga Waxool.
Cabdalla Ladhiif waxa uu xulka qaranka kusoo biiray dhammaadkii 1976-kii gaar ahaan ciyaartoyda yaryar isaga oo kulamo badan u saftay qaranka sidoo kalena qeyb ka ahaa ciyaatooyda waaweyn, laacibkan ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu horreeyay ee caawin ka sameeya garoonka Stadium Muqdisho oo markaasi la dhisay isaga oo ka caawiyay xiddigihii hore ee Horseed Maxamed Ismaaciil Siteey sannadkii 1978-dii.
Intii uu kubadda cagta ku jiray waxa uu kulamo badan kusoo ciyaaray meel ka baxsan gudaha dalka isaga oo metalaya kooxda Horseed iyo qaranka Soomaaliya. Sannadkii 1987-dii ayuu isaga tegay kubadda cagta dalka waxa uu aaday koox ka dhisan waddanka Yeman oo lagu magacaabo Al Sanca.
Kahor inta uusan ka dhaqaaqin dalka oo uu gudaha ka ciyaarayey waxa uu intiisa ugu badan u ciyaaray kooxda Horseed oo uu kamid ahaa intii u dhaxeysay sannadkii 1975-ilaa 1987-dii, waxaana uu kula guuleystay koobab badan oo isugu jira Horyaal iyo Jeneraal Daa’uud, waxaana lagu xisaabiyaa xiddigihii ugu wacnaa ee ka ciyaara khadka dhexe kubadda cagta Soomaaliya.
W/Q: Maxamed Xasan Maxamed “ Owen”
Previous: Facebook oo xushmad u muujinaya dadka dhintay ee adeegsan jiray shabakadda
Next: Jose Mourinho oo leylin doono Koox katirsan Bundesliga
Manchester United oo wadahadalo kula jirta Eric Bailly
Maanta oo kale Obafemi Martins oo ay taariiqdu xusayso